Munguva pfupi yapfuura, Bitcoin inoita kunge iri padambudziko. Kunyangwe hazvo mutengo weBitcoin uchiratidzika kunge unonyanya kushanduka, iyo cryptocurrency yanga iri munguva yekubatanidzwa mumavhiki maviri apfuura, mushure mekurova kwenguva pfupi madhora mazana manomwe nemakumi mana nemakumi mana. Kufamba pakati penzvimbo yepamusoro ye $ 6,000 nenzvimbo yakaderera ye $ 7,000. Ne ...
Musi waGumiguru 31, 2008, chitupa chakasainwa naSatoshi Nakamoto chakagadzirisa dambudziko iri nebepa remapeji-mapfumbamwe ekuti ungandibhadhare sei mune network isingazivikanwe zvachose. Isu tava kuziva kuti murume asinganzwisisike anozivikanwa saSatoshi Nakamoto uye iwo mapfumbamwe mapeji akagadzirwa kunze kwemweya mutete wakaenzana ne100 bhiri ...
Pakutanga makore 700 Sweden isati yaburitsa mapepa ekutanga eEurope muna 1661, China yakanga yatanga kudzidza kudzikisira mutoro wevanhu vakatakura mari yemhangura. Mari idzi dzinoita kuti hupenyu huome: inorema uye inoita kuti kufamba kuve nenjodzi. Gare gare, vatengesi vakafunga kuisa mari idzi ne ...
btc mudziyo, antbox mudziyo, akashandisa michina yemigodhi yekristpto, antminer mudziyo, mudziyo we bitmain, crypto yekuchera asic,